जाडो मौसममा छालालाई कसरी जोगाउने ? | Makalukhabar.com
जाडो मौसममा छालालाई कसरी जोगाउने ?
मंसिर ९, विराटनगर । जाडो बढेसँगै चिसो मौसममा छालामा बिभिन्न प्रकारका रोगहरु सुरु हुँदै जान्छ । चिसो मौसममा छालामा देखा पर्ने भनेको मुख्य समस्या सुख्खापन रहेको बिराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डा. सव्रिना यमु श्रेष्ठले बताइन् ।
उनकाे अनुसार जाडो बढेसँगै वातावरणमा हुमेडिटी आग्रता घट्ने भएका कारण छाला सुख्खा हुने, छाला पत्रपत्र हुने, जस्ता समस्या हुने गरेकाे पाइन्छ । यस्ता समस्यालाई सुरुवात देखि नै ख्याल नराख्ने हो भने अन्य समस्या उत्पन्न हुने श्रेष्ठको बताउँछिन् ।
अन्य उमेर समुहमा भन्दा पनि वयस्क र बच्चामा यस्ताे समस्या हुने गरेको उनी बताउँछिन् । चिसोबाट छालामा कुनै पनि नकारत्मक असर हुन नदिनका लागि बिभिन्न उपायहरु अपनाउनु पर्ने डा. श्रेष्ठले बताइन् । चिसोमा छालालाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा बिराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डा. सव्रिना यमु श्रेष्ठसँग मकालु खबरले गरिएको केही कुराकानी ।
चिसोबाट बच्ने उपाय
– चिसो मौसममा छालाहरु सुख्खा साथै पत्रपत्र हुने भएकाले छालालाई नरम राख्नको लागि कडा, कडासाबुननहरु प्रयोग नगर्ने ।
– अधिकांश मानिसहरु एन्टिसेफ्टी साबुन जस्तै डिटोल, लाईफबाेइ जस्ता साबुन प्रयोग गर्ने गर्दछन् उक्त साबुनले छालालाई सुख्खा बनाउने भएकाले प्रयोग नगरेकै राम्रो हुन्छ ।
– छालालाई नरम बनाउनका लागि साधारण मस्चराईजर साबुन जस्तै लक्स, डोप साबुन प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
– नुहाए पश्चात लुगा लगाउनु भन्दा अगाडि विषेश गरेर नरिवलको तेलको प्रयोग गर्दा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ । जस्ले गर्दा छालाई नरम राख्न मद्दत गर्दछ ।
– मस्चराईजर क्रिम प्रयोग गर्दा पनि छालालाई नरम राख्न मद्दत गर्दछ ।
– तोरीको तेल सकभर प्रयोग नगर्ने । वातावरण परिवर्तन भएसँगै तोरीको तेलमा हुने एक प्रकारको तत्वले घामको एलर्जीसँगै अन्य छालाको समस्या हुने भएकाले तोरीको तेल प्रयोग नगरेकै राम्रो ।
– बच्चाहरुका लागि पनि कडा सावुन प्रयोग नगर्ने । नुहाए पश्चात बच्चालाई बेवी तेल, नरीवलको तल वा जैतुनको तेल प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
चिसो मौसममा छालामा देखिने समस्या
– प्रमुख समस्या छालामा सुख्खापना आउने ।
– टाउकोमा चाँया आउने यस्का लागि डाक्टरको सल्लाह अनुसार एन्टिडेन्ड्रफ सेम्फु प्रयोग गर्ने ।
– चिसोमा अधिकांश मानिसहरु घाममा बस्न रुचाउने भएकाले कतिपयलाई छालामा घामको एलर्जी पनि देखिन सक्छ । यस्का लागि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधी प्रयोग गर्ने ।
– सुख्खापनले ल्याउने चउरीपना, चाँया पोतो ।
– चिसोका कारण औँला सुनिने, छाला रातो हुने साथै चिलाउने जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछन् । यस्का लागि आगोको ताप, हिटर ताप्ने भन्दा पनि न्यानो पञ्जा प्रयोग गर्ने ।
– विशेषतः छाला सम्बन्धि ‘कुरा गरिरहँदा सौन्दर्यको पनि कुरा आउने गर्दछ । कतिपयले आफ्नाे छाला कुन प्रकारको छ ख्याल नगरी क्रिम प्रयोग गर्ने गर्दछ ।
– सबैको छाला एकै प्रकारको हुँदैन त्यस्ले गर्दा आफ्नाे छाला कस्तो प्रकारको छ त्यहि अनुसार क्रिम लगाउने गनुपर्दछ ।
– हाम्रो समाजमा चेतनाको अत्यन्तै कमी छ । कतिपयले सुनाईको भरमा अरुले प्रयोग गरेर राम्रो भएको सुन्नेर क्रिम अथवा चाँया पोतोको औषधी प्रयोग गर्ने चलन छ त्यसले झनै नकारात्मक असर पार्दछ ।
– चिकित्सकको परामर्श बिना औषधी वा क्रिम प्रयोग गरेमा छाला पातलो हुने । रगत नै चुहेला जस्तो हुने जस्ता समस्या हुन्छ । त्यसैले गर्दा सानो तिनो जस्तो खाल्को समस्या देखा परे पनि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधी प्रयोग गर्न जरुरी छ ।
जाडो बढेसँगै विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा छाला रोग सम्बन्धि कतिको बिरामी आउने गर्दछ ?
- गर्मीमा भन्दा जाडो मौसममा छालाको समस्याका बिरामी घटेको नै छ । विषेश चिसोका कारण भन्दा पनि दाद बिर्गेर अर्थात बाहिर उपचार हुन नसकेका बिरामीहरु आउने गर्दछन् । गर्मीको समयमा दैनिक बिरामी जाँचमा आउँने संख्या ५० देखि ६० हुने गर्थ्याे भने अहिलेको अवस्थामा दैनिक ३० जना जस्तो बिरामी जाँचको लागि आउने गर्दछ ।
नेपाललाई नोबेल अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताको उपाधि
नेपालमा महिला पुरुषमा मोटोपना बढ्यो, ३६ प्रतिशत बालबालिकाहरुमा पुड्कोपना
मंसिर २४, काठमाडौं । पोषणका लागि कृषि तथा खाद्य प्रणाली सम्बन्धी ग्लोबल प्यानल र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयूक्त आयोजनामा भोकमरी सम्बन्धि अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । सोमबार स्वस्थ आहार प्रदान गर्न, भोकमरी अन्त्य गर्न र कुपोषण तथा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्नका लागि विद्यमान खाद्य... जारी राख्नुहोस...
स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज भट्टको रिहाईको माग गर्दै डोटीमा स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित
मंसिर २४, डोटी । स्वास्थ् चौकि इन्चार्जको रिहाईको माग गर्दै डोटीमा आज (मङ्गलबार) देखि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको खार खोप केन्द्रमा गत मंगलबार ५ महिने बच्चालाई खोप लगाउँदा ५ महिने शिशु प्रविण मल्लको ज्यान गएपछि पीडित पक्षले लापरबाहीका कारण बच्च... जारी राख्नुहोस...
सुधारोन्मुख अवस्थामा वीपी प्रतिष्ठान, २५ गते स्वास्थ्यमन्त्रीले निरिक्षण गर्ने
मंसिर २३, काठमाडौं । भ्रष्टाचार र वेथितिले ढल्न लागेको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तङ्ग्रिने क्रममा छ । प्रतिष्ठानमा भइरहेका पछिल्ला सुधारका कामले प्रतिष्ठान सुधारोन्मुख अवस्थामा गएको छ । खासगरी ब्यवस्थापन र उपचार सेवामा अहिले प्रतिष्ठानमा धमाधम योजना बनाएर काम थालिएको प्रतिष... जारी राख्नुहोस...
नेपाल मेडिकल एण्ड ल्याब एक्स पो २०१९ हुँदै
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो एक मात्र विस्तृत मेडिकल र डायग्नोस्टिक प्रदर्शनी ‘नेपाल मेडिकल शो’ यहि डिसेम्बर १३–१५ (मंसिर २७–२९) काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा हुँदैछ । यस प्रदर्शनी संगै ‘नेपाल ल्याब एक्स पो’ र ‘हेल्थकेयर सप्लाई चेन शो’ पनि आयोजित हुनेछन् । हेल्थकेयर सप्लाई चेन शो भने यसै वर्ष मात्र इ... जारी राख्नुहोस...
नेपाल मेडिकल एण्ड ल्याब एक्सपो २०१९ हुँदै
मंसिर २२, काठमाडाैँ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो एक मात्र विस्तृत मेडिकल र डायग्नोस्टिक प्रदर्शनी “नेपाल मेडिकल शो” यहि डिसेम्बर १३ तारिख देखी १५ तारिख सम्म (मंसिर २७–२९) काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा हुँदैछ । यस प्रदर्शनी संगै “नेपाल ल्याब एक्सपो” र “हेल्थकेयर सप्लाई चेन शो”पनि आयोजित हुनेछन्। हेल्थकेयर सप्... जारी राख्नुहोस...
नेपाल मेडिसिटीद्वारा १०० भन्दा बढि महिलाको पाठेघरको जाँच
मंसिर २२, जनकपुर । जनकपुरमा आयोजना गरिएको वाउ फेस्टिभलको मेडिकल पार्टनरका रुपमा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको मेडिकल टोलीले मिथिलाका महिलाहरुको पाठेघरको जाँच गरेका छन् । मंसिर २० र २१ माआयोजना गरिएको वाउ अर्थात विश्वका महिलाहरु नाम दिइएको फेस्टिभलमा स्वास्थ्य सँगै विभिन्न विधामा अर्न्तक्रिया बिचार गोष्ठि... जारी राख्नुहोस...